Ao Amin’ny Tatitra Momba Ny Fahalalahan’ny Aterineto Any Afrika, Tena Ratsy Ny Isa Azon’i Gambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2015 3:17 GMT
Ny sary fanehoana ny Fahalalahana amin'ny Aterineto 2015, navoakan'ny “Freedom House” (Tranon'ny Fahalalahana).
Tany amin'ny laharana faharoa amin'ny ratsy indrindra no nisy an'i Gambia tamin'ireo firenena 12 any Afrika Atsimon'i Saharà, tao anatin'ny fanadihadiana ny Fahalalahan'ny Aterineto.
Tao anatin'ny tatitra 2015, “Fahalalahana Amin'ny Aterineto”, fanaony isan-taona, nanome laharana firenena hatramin'ny 65 isa maneran-tany amin'ny zo sy fahalalahana iainan'ireo olona tsirairay amin'ny tena fiainana ao anatin'ny firenena tsirairay avy ny Freedom House, fikambanana mitoetra any Amerika, izay manindrahindra ny fahalalahana sy ny demôkrasia manerana ny tany. Manana tanjona ny handrefy ny fahalalahan'ny firenena tsirairay eo amin'ny lafiny Aterineto sy ny media niomerika, mifototra amin'ny fitambaran'ny fomba fanao, manaraka tanteraka ny maridrefy iraisam-pirenena momba ny fahalalahana maneho hevitra, ny tatitry ny Fahalalahana amin'ny Aterineto.
Maneho lafiny lehibe telo ilay tatitra :
Sakana amin'ny Fidirana manome ny andinindininy amin'ireo sakantsakana amin'ny fotodrafitrasa sy ny ara-toekarena, ny fanarahamaso ataon'ny lalàna sy ny tompony amin'ireo mpamatsy tolotra Aterineto, ary ny fahaleovantenan'ireo sampana mpametraka ny lalàna;
Fetra amin'ny fanadihadiana ny Votoatin‘ireo fepetra araka ny lalàna momba ny votoaty, fanivanana ara-teknika sy fibahanana ireo vohikala, fanivanan-tena, ny fahavitrihana/fahabetsahan'ny karazana mediam-baovao amin'ny Aterineto, ary ny fampiasàna ireo fitaovana niomerika amin'ny fanetsiketsehana ny olom-pirenena;
Ireo fanitsakitsahana ireo Zon'ny Mpampiasa ny Aterineto, mijery ny fanarahamaso, ny fiainany manokana, ary ireo vokatry ny fitenenana sy ireo zavatra atao amin'ny Aterineto, toy ny fanagadraina, fanenjehana ivelan'ny lalàna, na fanafihana amin'ny Aterineto.
Vokatra natambatra avy amin'ireo torohainy nangonina avy amin'ny fikambanan'ireo mpikaroka, izay ahitàna ireo mpitoraka bilaogy ao amin'ny firenena, mpianatra amin'ny ambaratonga ambony, mpanao gazety, ary manampahaizana amin'ny teknolojia.
Afaka miditra amin'ny Aterineto ny 16.0%-n'ireo olona miisa 1.900.000 any Gambia. Kanefa, ilay orinasam-pifandraisana an'ny fanjakana, “Gambia Telecommunications Company Limited” (Gamtel), no manana ny hosona “fibre optique” izay mampifandray ny firenena amin'ny Aterineto iraisam-pirenena.
Tamin'ny fanoratany anarana tao amin'ny Universal Periodic Review (UPR) (Fijerena Fanao amin'ny Fotoana Voatondro Maneran-tany) ho an'i Gambia ny taona 2014, nilaza izao ny fikambanana “Amnesty International” “Hatramin'ny Universal Periodic Review (UPR) voalohany ho an'i Gambia ny taona 2010, niharatsy ny fanajàna ny zon'olombelona tao amin'ny firenena. Mbola manohy manempotra ny fahalalahana miteny ary manao fanitsakitsahana zon'olombelona hafa ihany koa no sady tsy mizaka ny valin'ny nataony ihany ny governemanta.”
Ny taona 2013, nandany lalàna vaovao i Gambia, izay manasazy ireo tsikera na miaro ireo olom-panjakana amin'ny Aterineto. Ny (fanitsiana) ny Lalànan'ny Fampitàm-baovao 2013 dia mitady ny hanasazy ny “fikotrehana herisetra hanoherana ny governemanta na ireo mpiasam-panjakana”, ary mikendry ihany koa ireo olona izay “manao saritatra na manao fanambaràna mihoa-pefy mamely ireo mpiasam-panjakana” .
Ny volana Martsa, Gambiana 2913 no nampiasa ny media sosialy mba hanabaty ny Filoha Jammeh sy ny gazety mpomba ny governemanta, tamin'ny nilazany fa fanekena ny fitondran'ny Filoha Yahya Jammehy ny taratasy nalefan'ny Filoha Amerikana Barack Obama taminy.
Nampiseho ilay tatitra fa teo anelanelan'ny volana Jona 2015 sy May 2015, niseho ireto fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny Aterineto ireto:
Nifanesy ireo fahatapahan'ny Aterineto matetika tao anatin'ny taona 2014 sy 2015, tafiditra tamin'izany ilay fahatapahana lava nandritra naharitra herinandro maninjitra ny volana Aprily 2015
Raha nalàna ny fibahanana ny “Voice over Internet Protocol” (VoIP) malaza, an'ny sehatra Viber, ny volana Jolay 2014, mbola am-polony kosa ireo vohikalam-baovao mpanohitra nitohy voabahana.
Ireo tatitra kely mahatsikaiky dia nampiseho fa nisy ny fitomboan'ny “fanjavonan'ny” votoaty ara-politika mafanafana tao amin'ny Aterineto noho ny fampitahorana avy amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta.
Nitondra tamin'ny famotsorana ny mpikatroka iray mafana fo sady mpitoraka bilaogy ny hafanam-po niomerika, izy izay notànana tsy nisy fiampangàna noho ny asa niarahany tamin'ilay kabinetra mpanao fanadihadiana, Gallup.
Ny Jolay 2014, nenjehina ary nasaina nandoa onitra1.250 dolara Amerikana ny olona iray mpanohana ny antoko lehibe mpanohitra, tamin'ny fampiasàna ny Skype mba handefasana mivantana ny fitokonamben'ny mpanohitra ara-politika tao amin'ny Freedom Newspaper ao amin'ny Aterineto, izay mitoetra any ivelany.
Voasambotra ny volana Aogositra 2014 ny mpanao gazety tao amin'ny Aterineto teo aloha, nampangaina ho nandefa loharanombaovao mafanafana tany amin'ireo “fahavalo”n'ny governemanta mitoetra any ivelany. Nampijaliana nandritra ny fitazonana azy, navotsotra tsy nisy fiampangana ary avy eo nandositra ny firenena. Fitazonana ivelan'ny lalàna sy fanaovana sotasota, nitondra fahafahakeliny roa hafa mpanao gazety amin'ny Aterineto handositra ny firenena ka hanao sesitany ny tenany.
Ny Filoha Yahya Jammeh izay teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1994, hoy ireo tatitra manamarika, dia nanivana ny Aterineto teo amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 2006. Nahazo fitambaran'isa 65 ilay firenana, raha 100 no ratsy indrindra.
Maneho tabilao matrokanà fanivanana ny Aterineto izay miha-mahazo vahana hatrany manerana ny tany ilay tatitra, milaza hoe “Nandany lalàna vaovao mba hampitomboana hatrany ny fanarahamaso ireo governemanta 14 tao anatin'ny firenena 65 tato anatin'ny taona faramparany. Nihetsika ireo governemanta maneran-tany mba hibahana ny fanafenana ny zavatra soratana sy nilaza ny tsy tokony hanaovana ny fanakonana anarana ho an'ireo mpampiasa Aterineto rehetra.”
Mampiseho io fa: “Maro ireo governemanta manao famoretana ireo orinasa sy ireo olon-tsotra mba hanala votoaty, fa tsy hoe bahanana fotsiny.” Voatondro ho mpanitsakitsaka farak'izay ratsy indrindra ny fahalalahan'ny Aterineto tato anatin'ny taona i Shina, satria ny Filoha Xi Jinping nanao ny “fiandrianan'ny Aterineto” ho iray amin'ireo laharampahamehany ao anatin'ny fotoana maha-filohan'ny Antoko Kaominista Shinoa azy, izay nahatonga ireo mpampiasa Aterineto hiatrika famoretana noho ireo “tsahotsaho,” fampiharana mafimafy kokoa ireo lalàna manohitra ny fanafenana ny tena anarana, ary ireo fanakorontanana ireo fitaovana izay fampiasa matetika hidifiana ny sivana.
Fa tsy irery i Shina amin'izany. Syria sy Iràna no faharoa – sy fahatelo amin'ny laharana ratsy indrindra. Any Afrika atsimon'i Saharà, eo amin'ny lohany ao amin'ny faritra i Etiopia miaraka amin'ny fitambaran'isa 82, raha niakatra laharana 4 be izao tamin'ny laharana maneran-tany.
Nanipika izao i Jeffrey Smith, mpanoratra sady mpikatroka mafana fo , raha naneho ny fihetseham-pony tao amin'ny Twitter :
Ny dikan'izany dia hoe “nandoa ny sarany lafo indrindra tamin'ny fitsanganana nanohitra ny haratsian-toetran'i #Jammeh Yahya ireo olom-pirenena ao #Gambia.”
Nitaraina i Gainako (@Gainako):
#Gambia: Mafy amin'ireo olom-pirenena izay mihevitra ny hahatsara ny fireneny ny mahita ny firenena mihasimba hatrany noho ny fitiavantena
David Kaye, Mpitatitra Manokan'ny Firenena Mikambana momba ny fampiroboroboaba sy ny fiarovana ny zon'ny Fahalalahana Maneho hevitra sy Miteny, nilazalaza ny tatitry ny Freedom House ho tena zava-dehibe ary nanamarika izao:
.@FreedomHouseDC mamoaka ny tatitra fanaony isan-taona izay tena zava-dehibe tokoa mikasika ny #netfreedom2015. Mitotongana hatrany 5 taona mifanesy izay
Ahoana no hanomezana isa ireo firenena?
Kendren'ilay tondro ny hijery ny “tontolo rehetra manodidina mampandeha” ny fahalalahana amin'ny Aterineto , ao anatin'ny firenena tsirairay avy, amin'ny alalan'ireo karazana fomba fanontaniana 21, notsinjaraina ho ao anatin'ireo zana-tsokajy telo, izay natao hanasongadinana ireo karazana olana tena manan-danja.
Mamarana ilay tatitra hoe amin'ny fomba maro, iray amin'ny fanamafisana sy fampifanarahana ireo fameperana ny Aterineto iny taona lasa iny, fa tsy hoe fitotonganana mahavariana vaovao akory. Eo am-panamafisana ny fampiharana ireo fomba fiasany izao ireo governemanta izay efa nanitatra be ireo karazana fitaovana ho fanarahamaso ny sehatry ny Aterineto, tamin'ny fanakorontanana ireo tambajotran'ny TIC, fibahanana sy fanivanana ny votoaty, ary fanaovana fanarahamaso amboletra. Satria lasa tsy dia mandaitra firy intsony ny fibahanana, maro ireo governemanta niova ka nanivana tanteraka ny votoaty tamin'ny alalan'ny fitakiana fanesorana votoaty na mafimafy kokoa, paikadinà famafàna. Ary satria ireo mpampiasa Aterineto efa za-draharaha mitodika bebe kokoa any amin'ny fitaovana fanafenana ny zavatra alefa sy ny tsy fametrahana ny tena anarana mba hiarovana ireo zony, miezaka amin'ny alàlan'ny sehatry ny politika ireo solontena ao amin'ny governemanta mba hialàna amin'ireo sakana amin'ny fanarahamaso, ka manao ny Aterineto ho lasa toerana tsy dia azo antoka ho an'ny olona rehetra.